Soomaali / Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah
Arday walba oo xaq u leh waxbarashada gaarka ah wuxuu helayaa adeeg ku salaysan baahidiisa shakhsiga ah. Kooxda waxbarashada gaarka ah oo ay ku jiran waalidiin ayaa diirada saaraya sidii loo caawin lahaa ardayda in ay helaan xirfado ay wax ku bartaan, dadka kula dhaqmaan, waxana ku qabsadaan si ay u noqdaan kuwo iskufilan intii suurtagal ah.
Haddii aad leedahay ilmo u baahan waxbarasho gaar ah, arin la xiriirta caafimaad, ama baahi naafo, fadlan la xiriir Xafiiska Adeegyada Gaarka ah 651-767-8321 kahor intaadan arjiga soo celin, ama la xiriirin maamulaha dugsiga aad dooratay si aad u ogaato in adeeg ku haboon laga heli karo dugsiga.
Dugsiyada oo dhan waxay leeyihiin wax kamid ah waxbarashada gaarka ah iyo adeegyada la xiriira. Laakiin adeegyada oo dhan lagama heli karo dugsiyada oo dhan. Liistada adeegyada waxbarashada gaarka ah ee hoos ku qoran ayaa laga heli karaa dugsi walba oo kamid ah dugsiyada hoose, dhexe, iyo sare.
Fasal caawiya ardayda uusan xanuunkooda la xiriira dareenka iyo dabeecadu uu san aadka u darnayn. (EBD)
Caawimaad kale oo la xiriirta naafanimada iyo xanuunada kale sida dhaawaca maskaxda ama jirka, macalimiinta waxbarashada gaarka ah iyo tan caamka ah ayaa dugsiyada dhan la shaqaynaya si ardaywalba u helo adeeg ku haboon.
Koritaanka Maskaxda oo daaha (Elementary) (DD)
Adeega Dugsiyada ee Bulshada
Kobcinta la Qabsashada Waxbaashada Jirka
Adeega Kalkaalisada Iskuulka
Adeega tababarka si loo caawiyo ardayda in ay la qabsadaan dugsigooda iyo bay’ada uu ku yaalo (Dugsiga Sare Kaliya)
Ardayda baahida caafimaad ee aadka u daran qabta gaar ahaan dhinca Koritaanka Xiska (Developmental Cognitive Disabilities), Cudurka Ootiisamka (Autism Spectrum Disorders) iyo Cudrada la xiriira Dareenka iyo Dabeecada (Emotional or Behavioral Disorders ), waxaa dhici kara in ay u baahanyihiin adeegyo ay bixiyaan hay’ado ama barnaamijyo kale oo gaar ah ugu yaraan maalinta qaarkeed ee wakhtiga dugsiga. Haddii qorshaha IEP uu leeyayahay wax badan 180 daqiiqo oo ah adeeg dhinaca taageerada waxbarashada ee saddxdan qeybood, ilmaha waxaa loo gudbinayaa iskuul ku yaalla aaagga uu degganyahay oo bixiya adeegyadaas. Waalidiintu waxay la shaqayn karaan kooxada Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah si ay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dugsiga ay dooranayaan u ogaadaan.
Ku daridda Ardayda Naafada ah Fasalada Guud ee Waxbarashada
Ardayda naafada ah waxay xaq u leeyihiin in ay jawi dugsi oo fiican helaan oo la mid ah ardayda fasalda iyo waxbarashada guud dhigta. SPPS waxay kordhiyeen wada shaqaynta iyo wada barista macalimiinta waxbarashada guud iyo macalimiinta waxbarashada gaarka ah si ardayda waxbarashada gaarka ah iyo ardayda waxbarashada guud fasalada u wada galaan. Iyaga oo u hagayo balan-qaadkoodii ku aadanaa cadaalada iyo sinaanta waxbarashada Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay ka caawinayaan ardayda naafada ah in ay gaaraan heer waxbarasho iyo goolkooda nolosha.
Waxbarashada Gaarka ah ee Caruurnimada-hore
Barnaamijka u adeega caruurta laga billaabo dhalashada ilaa iyo saddex jir waa adeeg sanadka oo dhan socda lacag la’aanna ah. Barnaamijka loo yaqaano Individualized Family Service Plan (IFSP) waxaa lagu saleeyaa waxyaabaha ay waalidku u arkaan inay muhiim u yihiin ilmahooda. Adeegyada waxaa lagu bixin karaa guryaha ama xarumaha bulshada. Wixii faah faahin ah wac 651-744-5661.
Adeegyada Waxbarashada Caruurnimada-hore ee Gaarka ah (ECSE) ee ilmaha 3-4 jirka ah waxaa lagu bixiyaa fasallada Pre-K (4 jir) ee SPPS, xarumaha bulshada, goobaha daryeelka ilmaha, dugsiyada caruurta (Head Start), iyo fasallada xanaanda kahor. Fasalada Gaarka ah ee caruurta u dhexeeya 3-5 jir waxaad ka heli kartaa Dugsiyada Hoose ee SPPS. Akhbaar dheeraad ah oo la xiriirta barnaamijka waxbarashada gaarka ah ee caruurta, fadlan wac 651-744-8094.
Ogow: Ardaywalba oo xaq u yeesha waxbarashada gaarka ah wuxuu xaq u leeyahay in uu helo waxbarashada dadweynaha oo ku habon oo bilaash ah taas oo wax lagu xirayaa jirin.
(Sharciga Waxbarashada Dadka Naafad ah, 2004).
Qorshaha barnaamijka ee IEP, waxaa khasab ah in uu ogaado baahida gaadiid ee arday walba. Si ay u helaan macluumaad dheeraad ah oo la xiriira gaadiidka waalidiintu waxay la hadli karaan qof ka mid ah kooxda qorshaha waxbarashada shakhsiga ah ee dugsiga. Inta badan, ardayda naafada ah waxay raacayaan nidaamka gaadiidka ee Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul.
Gudigga La-taliyayaalka Waxbarashada Gaarka ah
Gudigan wuxu ka koobanyahay waalidiin, macalimiin iyo dad bulshada ka mid ah oo danaynaya, waxay talooyin ku saabsan waxbarashada gaarka ah siiyaan kaaliyaha madaxa dugsiyada ee xafiiska adeegyada gaarka ah. Ka qayb-qaadashada waalidku waxay gudiga u ogolaanaysaa in ay:
Talo ka bixiyaan soo saarista iyo dib u eegista xeerarka iyo dhaqamda la xiriira waxbarashda gaarka ah
Bartaan oo ay kala faa’iidaystaan qoysaska kale ee haysta caruur naafa ah
La yeeshaan xiriir xoog leh shaqaalaha waxbarashada gaarka ah
Aqoon badan u yeeshaan ilaha caawin kara waxbarashada gaarka ah
Akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan gudigan, wac Jackie Kelly at 651-767-3437 ama u dir iimeyl Jackie.Kelly@spps.org.
Ciyaaraha Fudud ee Ku Haboon Naafada waxay baxaan
Ardayda qabta xanuunka jirka/maskaxda ama naafada ah ee fasalada 7-aad ilaa 12-aad waxaa lagu dhiiri galinayaa inay fiiriyaan ciyaaraha fudud ee degmada. Ardayda ka qayb qaadata ciyaaraha waxay horumariyaan caafimaadka jirkooda, waxay samaystaan saaxiibo, waxay qayb ka noqdaan kooxo, waxay ka qayb-qaataan ciyaaraha dugsiyada sare ee Gobolka Minnesota.
Dayr: Adapted Soccer
Jiilaal: Adapted Floor Hockey
Gu’: Adapted Bowling or Softball
Ciyaar oo Kamid Noqo Koox:
Hel Abaal marin (Earn a Varsity letter)
Tartran ilaa heerka Gobolka (Compete at the state level)
Ka mid noqo ciyaartoyda usbuuca (Be prep athlete of the week)
Wixii su’aala, ka wac agaasimaha ciyaaraha fudud Dave Mergens at 651-744-5640. Jadwalka iyo macluumaad dheeraad ah, booqo spps.org/sports.